deb vs. rpm | Linux Vakapindwa muropa
Zvichida chimwe chinhu chakashamisika nevazhinji, kunyanya kana uchitanga muLinux haisi chete iyo package package system iri nani asiwo, chii kurongedza kuri nani.
Ini handireve kutaura zviri nani, kungoona mutsauko uripakati pe .deb ne .rpm. Uye ini ndinozviona zvakaoma, sezvo ini ndisingawani misiyano mizhinji.
Kune zvekare mamwe mashoma mapakeji, uyezve iwo mabara.
Ose ari dhatabhesi ane mapakeji, zita, vhezheni, kutsamira, uye, mu .deb, akakurudzirwa mapakeji. Pakutanga mu .rpm, pakanga paine chinhu: kana uchivandudza software, mafaira ekumisikidza anosara asina kusimba kana kutsigirwa, izvozvi zvakare anoshandisa .deb.
Ruzivo rwangu nderekuti madhebhu ari kukurumidza kutsvaga kutsamira uye kuti .rpm, kazhinji, bvunza kutsamira kwakawanda (zvirinani, ini handikurudzire kuzviita kunze kwenyika uye kutsvaga kutsamira mumwe nemumwe, zvakaitika kwandiri ne openSUSE)
Ose anotendera iwe kugadzirisa iyo system, kutsvaga mapakeji, kuisa / kusunungura, tsvaga kutsamira uye nezvimwe. Vanoita kuti upenyu huve nyore kwatiri. Asi pasi pasi, ndeupi mutsauko wavo chaiwo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » deb vs. rpm
Hapana chakakodzera. Ivo vaviri vanoshanda chinangwa chimwe chete.
Iyo LSB inotsvaga iyo RPM seyakajairwa, asi ichave yakaoma kwazvo kune Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa kubva kuchinjira kune iyo package system.
Kune misiyano mizhinji munzira yekuvaka ivo, semuenzaniso, muna rpm ruzivo rwese rwekuvaka rwunotsanangurwa muef file, nepo mudhidhi yakakamurwa kunyanya kuita mafaera maviri, kutonga nemitemo.
Mune debs ine iyo inodzora faira unogona kuwana zvinoenderana kuti uverengerwe iwe, nepo mu rpm iwe unofanirwa kuzviziva kare uye kuzviisa nemaoko (izvi zvinorema uye zvine njodzi).
Mu debs pane nzira dzinoverengeka dzekuzvigadzira: kuvaka, kuvaka, nezvimwe; ne rpm sekuziva kwangu kune imwe chete.
Ipapo chinangwa chekupedzisira chakafanana: gadzira yakamanikidzwa package kana mapakeji echirongwa nemamwe magwaro uko nzira yekuisa mafaera ese echirongwa pane ino sisitimu. Ngatirege kukanganwa kuti ndicho chinangwa chimwechete semaWindows uye Mac installers, hapasisina chakavanzika.
MuDebian mune hukuru hukuru hwekuwedzera mapurogiramu, nepo muMandriva (semuenzaniso) maitiro aya haana kunyanyo taurwa. Ichokwadi ndechekuti kuwanda hakuna kunyanya kukosha, uye zvivi zveDebian zvekuishandisa zvakanyanya.
Ndeupi ari nani? Kwete uye zvese, nekuti zvese zvinoenderana zvakanyanya nehunhu hwepaketi pane nzira yekupakira.
Ini ndinofunga kuti panofanirwa kuve neyakajairwa imwe, kungave iyo rpm kana iyo dhiri
Ini ndinosarudza iyo deb, nekuti ini ndinofunga ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye yakashandiswa, asi chero chingave chiri chakanaka, chero bedzi chiri chakasarudzika uye chepasirose, kuita kuti kuiswa kwezvirongwa zvitsva mune chero distro kuve nyore kune vashandisi vatsva. (hapana nzira, mazhinji acho anouya kubva pawindows $) ayo anozoshandiswa "kumisikidza kaviri tinya pa ***. exe faira".
Pindura kuna chanklor
Ini ndinofunga imwe nyowani inofanirwa kugadzirwa inoenderana neese ari maviri. Semuenzaniso, iri nyore faira neruzivo rwunoritumira kune maneja wepakeji uye rinoteedzera iwo maodha, kuumbiridza kana kutsvaga pane server kana munharaunda mukuita.
Ndinobvumirana naAlxe. Panofanirwa kuve neyakajairwa OpenSource chirongwa chechero system kana chikuva, kusanganisira aripo mapakeji mamaneja.
Kubudirira kunorara mune yakapfava inosimudza iyo inogadzirisa zvoga dambudziko rekutsamira rako. Zvishoma zvatinofanira kunetseka nezvazvo kuiswa kwechirongwa, uye zvimwe nezve basa ratinoita nechirongwa ichocho.
"Chinhu chidiki chatinofanira kunetseka nacho kumisikidzwa kwechirongwa, nezvimwe pamusoro pebasa ratinoita nechirongwa ichocho."
Zvizere unobvumirana. Nezve chirongwa chinowirirana nezvose zviri zviviri, zvakare, chokwadi.
Cristobal, ndatenda neruzivo.
Wakambonzwa nezve conary here?
Kana ndikakuudza kuti handisati ndamboshandisa debs kana rpms? XD
Zvakanaka, angangoita makore mashanu apfuura ndakashandisa RedHat neSuSE kwemwedzi yakati wandei, asi ini handina kumbokanganisa nemapakeji. : D
Ini ndinonyanya kutsigira maWEB, kunyangwe ini ndisina chandinopesana neRPM, pamwe imhaka yekuti ini ndaive neruzivo rwakanakisa nemadhabi pane ne rpm.
@zodman: Ikozvino hapana chinyorwa papeji rino, unogona kutsvaga zita iri reji mune mamwe mapeji kana kugadzirisa peji ino.
@insengrin: uye ikozvino iwe unounganidza zvese? Oo
Ini handifunge kudaro, ini handimboshandisa .rpm
Ini ndaishandisa Suse kwemakore mazhinji, uye ndakaedzawo Mandrake, asi pakupedzisira ndakazopedzisira ndave paDebian, uye iwe unogona kuti, ndashandisa mafomati ese (rpm uye deb), ayo anoita kunge anokurumidza kuisa iyo rpm, ndinofunga inofanirwa ngavadaro nekuti mhando yekumanikidza yavanoshandisa, uye zvakare iyo rpm ine hunhu hwandisingakwanise kuwana mumadhodhi, uye ndizvozvo ivo vanoratidza zuva rakagadzirwa pasuru uye zvakare zita remupaketi, vasati vasiyanawo mune izvo vakaunza hurongwa hwekutonga nemasigine uye ini ndinofunga madhiri haadaro. Kune rimwe divi, kana ndichichinjira kuDebian (ini zvakare ndakashandisa Kubuntu) nehurongwa hwayo hwekutakura, ini ndakanganwa nezvematambudziko ekutsamira, asi handizive kana izvo zvichikonzerwa nehurongwa hwepakeji kana iko kugovera kwacho, chinhu chiri kuti kwandiri hapana sarudzo kuna Debian futi ...
PS: Pane chirongwa chinonzi Alien http://es.wikipedia.org/wiki/Alien_(aplicación), iyo inobvumidza iwe kushandura mapakeji kubva kune imwe fomati kuenda pane imwe, inowanzo shanda chaizvo, kunyangwe isu tisinganyanye kuda kuishandisa.
Zvakanaka ... musoro wenyaya wakapamhama, asi ini ndinoti zvinotevera, ndinobva kuDominican Republic uye ndinotora chikamu muFCLD (Dominican Free Code Foundation) mutungamiri wavo ndiAntonio Perpiñan, anofungidzirwa sababa vemahara software muLatin America naRichard Stallman iye ... Antonio anoti maRPMs akatsiga, kunyange zvichioneka kuti maDEB akagadzirwa kuisa yakawanda, ndiko kuti, kwezuva nezuva, ndosaka (anodaro) ndeyekuti Ubuntu inoshandisa DEB, sezvo ichiisa yakawanda uye ichiburitsa zvakawanda, asi muREDHAT kana CENTOS hauite izvozvo nguva dzese, nekuti inzvimbo dzeseva… pachezvangu ini ndinoda maDEB, handina chandinopesana nemaRPM asi ndinogara netsika nemashandiro…
@Jonathan Zvinonakidza zvaunotaura, sezvo Debian GNU / Linux, isina kugadzirirwa chaizvo kuisa / kusunungura zvakawanda, uye yakanangana nemidziyo yekugadzira yakadai sevhavha (inogara ichitaura nezveiyo Yakagadzika vhezheni)
Uye chokwadi ndechekuti ini handizive chii pamwe neiyo iyo iyo rpm yakagadzikana. ?
Chaizvoizvo musiyano mukuru uripakati pe rpm ne deb ndeye… kwete, ini handina zano. Asi ini ndadzidza zvakawanda kubva kune zvakataurwa nemunhu wese. Ndatenda.
hahaha anobvumirana zvachose naCesar
kusagadzikana kwese kwandave nako ne gnu / linux kwave kuri ne rpm distros: p: p: p fedora inondibata, asi pese pandinoyedza ndinorasikirwa nechishuwo, zvingangoita zvinenge zvitatu zvinoburitswa ...
Ini handikwanise kutaura kuti imwe iri nani pane imwe… asi ini ndave nezvakaitika zvirinani ne .deb
Ndine zano randakaverenga kumwe kunhu nezve "rpm kutsemuka", mune izvo zvakanzi kugadzirwa kwemarpm mapakeji hakuenderane zvakanyanya, mupfungwa yehuwandu hwenzvimbo dzavanogona kushanda pasina matambudziko, kunge madhiri, ayo zvinoshanda mune ese madhiri-based distros, uye mune iwo maposta devs akakurudzirwa kudzivirira chiitiko chimwe chete kubva kuzvidzokorora neepadian mapakeji, asi ini handina chokwadi nazvo ... ndakawana ini ndisinganyatso kurangarira ndichinyora chirevo ichi. : p
Chinhu chandinonyatsoda nezve debs inyaya yekuti madhibhodhi mareti ... akawanda, kutaura zvishoma, angangoita ese ma distros anotorwa kubva ku debian share yavo repos, panzvimbo ye rpm, kusvika pandakaedza, iri NYAYA yakasiyana zvakanyanya: p
Imwe nzira yandinowana inonakidza kwazvo ndeye tarballear, senge mune arch, kuti izvo maneja wepakeji anobata ndiwo ma tarball uye inochengetedza zvinoenderana, zvekuti mudiwa wepakeji wangu wandinoda haasisiri synaptic, asi shaman: D, asi hey, pano tiri kutaura nezve deb vs rpm uye izvo hazvina basa xD
Maonero angu ekuzvininipisa pamusoro pazvo, musoro unonakidza, zvingave zvakanaka kana mumwe munhu ane ruzivo akatidzidzisa zvishoma nezvenyaya iyi inonakidza!
Ichokwadi ndechekuti ini ndagara ndichishandisa .deb, asi kubva pane zvaunotaura hapana mutsauko wakanyanya ... kunyangwe mutsauko wakakosha wawataura unogona kunge uri wezvematongerwo enyika kana uchivavaka kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Ini handifunge kuti zvakafanira kumisikidza iwo, kunyanya kana paine mutorwa, kunyange mutorwa achigonawo kuunzwa mune makuru mapakeji maneja, kuti iite kuti ienderane, pamwe neyambiro dzinoenderana, hongu.
Nezve kuenzanisa kwekuisa i .exe, Ini handibvumane nezvataurwa pamusoro apa. Ini ndinorangarira kuti pandakachinjira kuLinux chimwe chezvinhu zvakandifadza zvakanyanya yaive iko kusununguka kwekuisa / kusunungura / kugadzirisa kuburikidza nezvakachengetedzwa. Muchokwadi icho chinhu chandisinganzwisise sezvo ivo vasati vatoteedzera muMicrosoft. Iko hakugone kuve nechimwe chinhu chinorwadza mbongoro pane kukwidziridzwa mumawindows ... chirongwa nehurongwa mutyairi nemutyairi, kana chirongwa chega chega chisina maitiro acho ekushandisa zviwanikwa kungo tarisa kuvandudzwa.
@Seth Dzimwe nguva. Asi kwete, ini ndinoshandisa Arch Linux's .pkg.tar.gz. : D
Ini zvirokwazvo ndinoda kushanda zvakananga neTarballs, Portage rulez!
tsime, ini ndagara ndichishandisa zvigoverwa zvichibva pana debian chaizvo nekuda kwenyaya iyi, zvese zvandinoda ndinogona kuisa (kunyanya) ne synaptic (kana apt-tora), uye ndinoiona ichinyatsogadzikana. Nezve izvo zvinotaurwa nebhendi pano, zvinoita sekunge pasina misiyano mikuru, asi ini ndinofunga kuti vanofanirwa kuimisa nekuti izvi zvinogona kuunza kusagadzikana kudiki kune linux world, kana imwe pasuru ine zvakangofanana zvakafanana neimwe, nei zviripo dzakawanda? semuenzaniso kernel_panic inotaura kuti maneja wepakeji anogona kubata tarballs, saka nei paine akawanda mapakeji? (Ini ndinofungidzira nekuda kwehukuru hwekurodha) asi pane akawandisa, kazhinji panofanira kunge paine tarballs uye yechipiri yakamisikidzwa sarudzo iyo ingaite kuti hupenyu huve hunoshanda zvakanyanya kune vanogadzira, webmasters uye newbies. PS: Makorokoto kunharaunda yeblog nekuti hakuna troll uye zvirevo zvacho zvese zvakanaka.
Parizvino uye zvinoenderana neruzivo rwangu rwekushandisa ese masisitimu, ini ndinozendamira kumaDEB. Zvirinani izvo zvandinoyeuka nezve iyo RPM system ndeyekuti pane kanopfuura kamwe chiitiko ini ndaive nematambudziko ekutsamira nazvo. Kune rimwe divi, iine DEB pazviitiko zvisingawanzoitika ndakave nematambudziko ekusagutsikana kutsamira uye yagara iri mumapakeji asiri eoffice yangu (Ubuntu).
Zvinotaridza kwandiri kuti uyu ndiwo chete musiyano wandinogona kutaura nekuti mune mamwe maitiro maitiro ekubata akafanana.
Kune rimwe divi, iyo sisitimu inoshandiswa naGentoo, kuumbiridza zvakananga zvirongwa zvese zvakaiswa, inoita kunge yakanaka kwandiri kana zvasvika pakuchengeta software yese yaunoisa nehunhu hunodiwa neicho chaizvo uye zvakare hwakarongedzwa zvakakwana kune hunhu. yemuchina wako. iyo inobvumidza kuita kukuru kwechigadzirwa. Chinokanganisa ndechekuti pese pese pazvinofanirwa kuisa chirongwa ichi, iwe unofanirwa kupfuura nemuitiro wese wekugadzira izvo zvinogoneka.
Nechikonzero ichocho, Roma yaigona neGerman ... nekuti vaive vasina kubatana uye vairwa pakati pemhuri.
Haisi kure kwazvo kubva kuchokwadi, zvisinei, zvakasiyana-siyana zvakanaka kwazvo zvakare ...
Mhoroi zvakanaka, ini ndaida kutaura kuti nyaya yacho inonakidza, ini ndakaedza zvese uye dambudziko neiyo RPM ndeyekuti nekukurumidza kana kumberi kutsamwiswa kwekuvimbika kunotanga. Alien haishande nguva dzose ... asi nyaya yakakosha yandinofungidzira ndeye yemitambo ... Zvinozivikanwa kuti munhu wese achazoda mitambo yemuno, asi kuitira kuti ikure panofanira kunge paine pasuru yepasirese inoenderana neese ma distros. Ini ndinofunga mushure meizvozvo isu taigona kutaura nezve windows windows mu linux, sezvo tiri vashoma uye pamusoro pezvose isu takakamurwa .... Nechikonzero ichocho Roma yaigona negermanyia… nekuti vaive vasina kubatana uye vairwa pakati pemhuri. Pfungwa iyi yakati fambei asi ichokwadi. Kwaziso
Pindura kuna damiancoverdale
Ini ndinofunga mutsauko chaiwo wakanyorwa munhoroondo, kuoneka kwekutanga kupihwa: redhat uye debian; Nekuda kweiyi "makwikwi ane hushamwari" ivo vakasara uye vakadzika midzi, pachezvangu sekuparadzira ndinotenda kuti iyo iri kuhwina ndiyo sarudzo yedebian, chaizvo nekuti iri nyore kana paine mamwe magwaro kana kune zvimwe zvinodzidzisa mapakeji, ini ndinofunga kuti neizvozvo yakanaka package iyo inoumbwa uye mukufamba kwenguva iri nyore kushandisa ndiyo iyo ine akanakisa mapakeji, kunze kweizvozvo pane akawanda mapakeji ari mune debian uye kuti mune kumwe kugovera kwete, saka kana iwe uchida kuenda ku distro ne rpm zvinosemesa kushungurudza kupinda mudambudziko rekutakura kana kuumbiridza chimwe chinhu kuti ugone kushandisa,
Kwazisai, uye ndinovimba kuti mune ramangwana zvichazondiitira nyore kushandisa iyo rpm
alex rdgz akadaro
Ndinozendamira kune .deb asi dai paive neyakajairika ndaizoda kuti matball ave nekuda kwekureruka kwavo uye nekukurumidza
edza slackware imwe yekutanga linux distros.
Pindura kuna Alex rdgz
Alex, ini ndakanyora iyi posvo, izvozvi ndinoshandisa slackware uye ndinonyatsoifarira;)
pane ese aya runyorwa rwemashoko, chinhu choga chandakasiya ndicho chinotevera.
rpm = kunetsa
deb = kazhinji_simple
Ini ndakatanga makore apfuura nered ngowani, ini ndaishandisa iyo rpm pasina zvakawanda zvakashamisa, ipapo ndakaedza suse ndisati ndawana novell (fuchili!) Uye ndobva ndasangana nedebian ... nanhasi ndichiri kufunga kuti yaibatsira uye yakandibatsira vazhinji zvinhu.
imwe yacho yaive mapakeji emadhiri.
ndosaka nanhasi ndichifunga kuti ndiyo yakanyanya distro. ikozvino ndiri kushandisa ubuntu. chokwadi ... chine zvinhu zvaro zvakaipa, asi kana iwe uchikwanisa, chiri gumi (kana 10+).
Ini handina chinangwa chakakura chekuchinja kune slackware kana gentoo ...
asi kana ndaida kuyedza imwe distro, ini ndaizoedza iyo yakakurudzirwa naStallman (UTUTO) uyo ane maneja wepakeji uye compiler iyo iri kutaurwa nezvayo yakawanda nemapampas aya «ututo-tora»
Javier Castaneda akadaro
Ndakatanga kushandisa Ubuntu kubva mushanduro 7.04 uye ndakazoziva iyo .deb. Inenge gore nehafu yapfuura ndakachinjira kuDebian uye chiitiko chacho chaive chakanaka, asi kuyedza kutsvaga zvakawanda nezvezvakanaka zveLinux ndakaedza Fedora 14 uye zvino Fedora 15. Ini tariro yekugadzirisa kutsamira, ndizvo zvinondikonzera pane izvi nguva yekusiya Fedora neayo .rpm uye kudzokera kuDebian neayo .deb.
(Nenzira iyo ini ndinoita kutaura uku kubva kuna Fedora 15 neGnome 3 ... ngatione kuti Gnome 3 inoshanda sei muDebian)
Pindura Javier Castañeda
Ndakagara ndichifarira kuomesa hupenyu hwangu, ini ndaishandisa Slackware kwenguva yakareba uye ndaizvifarira zvikuru gare gare ndichiyedza kugadzirisa neUbuntu 12, komputa yangu yakaparadzwa nezvinodiwa zveizvi zvakare BricsCAD ini handingamboite kuti ishande mu3D , ikozvino ini ndinoshandisa PCLinuxOS ndinoifarira zvakanyanya uye kusvika parinhasi handina kana matambudziko ne .RPM mapakeji, ini ndinogara nePCLinuxOS yangu, yakanaka kupenya, uye nekukurumidza.
yekona steam steam akadaro
Wangu Partner Uye ini ndichangobva kumisikidza yedu yekugeza shawa yeyuniti, chikuru chinhu chandasarudza
kutenga kwechinguva, ivo vadiki uye nhengo dzemhuri vanozvida,
handikwanise kuzviona ndichidzokera kumashawa akajairika zvakare
Pindura kukona svutugadzike
whirlpool inopisa mvura akadaro
Yakanyanya Yakanaka saiti mizhinji yehukuru hwemvura yekugezera ruzivo pano
Pindura kune whirlpool steam shower
Anoshamisa blog! Musoro wenyaya wako wakagadzirwa kana kuti wakautora kubva
kumwe? Dhizaini yakafanana neyako ine mashoma ma tweeks angaite kuti blog yangu ipenye.
Ndokumbira undizivise kwawakawana dingindira rako. Ndatenda
Mune ruzivo rwangu ndakaona zvishoma zvishoma pa .rpm zvichienzaniswa ne .deb kunyangwe izvo zvandinoda nezvazvo .rpm chiri chinhu chimwe chete, kutsamira kunotsvaga kwoga uye zvakare (zvirinani mu fedora) kudzvanya "tab" kuchazadzisa zvese izvo iwe unoda kunyora mune terminal kunoenderana nenzvimbo uye mamiriro ekushandisa, nekuda kwechikonzero ichocho ini ndakachinjira kuFedora, iyo kana zvichitemesa musoro inyaya yekuti pane nguva dzaunowana app chete mu .deb, muenzaniso chrome iri kure desktop, Mune maonero angu muyero unofanirwa kuve uri mune imwechete distro uye kana zvisingaite zvirinani enda ku .rpm